अजमोनलाइलमा फ्रिज गर्दै
AmazonSmile के हो?
AmazonSmile मा कुन उत्पादनहरू दानयोग्य दानहरूको लागि योग्य छन्?
मैले मेरो मौजूदा amazon.co.uk खाता smile.amazon.co.uk मा प्रयोग गर्न सक्छु?
Yes, you use the same account on amazon.co.uk and smile.amazon.co.uk। तपाईंको खरीदारी कार्ट, इच्छा सूची, विवाह वा बाल रजिस्ट्री, र अन्य खाता सेटिङ्हरू समान छन्।
तपाईंको पहिलो भ्रमणमा smile.amazon.co.uk you need to select ‘SarcoidosisUK‘ to receive donations from eligible purchases before you begin shopping. Amazon will remember your selection, and then every eligible purchase you make at smile.amazon.co.uk एक दान मा परिणाम हुनेछ।
मेरो कितना खरीद अमेजन दान गर्दछ?
थप जानकारी पत्ता लगाउन, जानुहोस् AmazonSmile FAQs.